ဦးနှောက်အခြေခံ: Neuroplasticity | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ဦးနှောက်အခြေခံ Neuroplasticity
အဆိုပါစကားလုံး neuroplasticity အဖြစ်ဖြိုဖျက် neuro "အာရုံခံဆဲလျ" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းအာရုံကြောဆဲလ်သည်။ ပလပ်စတစ် သည်ပြောင်းလဲနိုင်သော၊ ပုံသွင်း။ ပြုပြင်နိုင်သည်။ Neuroplasticity သည် ဦး နှောက်၏အတွေ့အကြုံအားတုံ့ပြန်ရန်ပြောင်းလဲနိုင်သောစွမ်းရည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဦး နှောက်သည်အချို့သောအာရုံကြောဆဲလ်များအကြားရှိဆက်သွယ်မှုများကိုအားဖြည့်ပေးပြီးအခြားသူများအကြားရှိဆက်သွယ်မှုများကိုအားနည်းစေခြင်းဖြင့်ယင်းကိုပြုလုပ်သည်။ ဦး နှောက်သည်မှတ်ဥာဏ်များကိုသိုသိုသိပ်သိပ်လေ့လာခြင်း၊ နားမလည်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်မှုကိုအခြေခံသည့်အချက်နှစ်ချက်မှာ
ပထမဦးစွာ 'အတူတကွဝါယာကြိုးများအတူတကွအလုပ်လုပ်သောအာရုံကြောဆဲလ်များ' ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်ရပ်နှစ်ခုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြစ်ပွားပါကပြင်းထန်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်မီးဖိုပူကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထိသည့်ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်မီးဖိုထိပ်၏ပုံရိပ်များနှင့်နာကျင်မှုလောင်ကျွမ်းနေသောနဗ်ကြောဆဲလ်များကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်။ ယခင်ကအဆက်အသွယ်မရှိသောဤဖြစ်ရပ်နှစ်ခုသည်အာရုံကြောဆဲလ်အကိုင်းများမှတဆင့် ဦး နှောက်ထဲတွင်အမြဲတမ်းအတူတကွချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွသောရုပ်ပုံများကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ခြင်းကကလေး၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေပြီးသူနှင့်သူမ၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုပုံစံကိုပုံသွင်းပေးလိမ့်မည်။
ဒုတိယအချက်မှာ 'အသုံးပြုပါ၊ ဆုံးရှုံးပါ' ဖွံ့ဖြိုးရေးအချို့ပြတင်းပေါက်ကာလအတွင်းအများဆုံး apt ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောအသက်အရွယ်များတွင်အထူးကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အပြုအမူများကိုသင်ယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသည်အသက် ၁၂ နှစ်မှစ။ ၊ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်တွင်ဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်သောဂီတသမားများမမြင်ရပါ။ ကလေးငယ်နှင့်မတူသည်မှာညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုသည့်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး သည်ပြင်ပအရာဝတ္ထုများကိုလိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်သူ၏ပင်ရင်းပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်လိင်အကြောင်းလေ့လာရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ အာရုံကြောဆဲလ်များသည်အင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းခြင်းနှင့်လိင်ကိစ္စစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အတူတကွမီးလောင်သောနေရာများမှမီးလောင်သောနေရာများသို့မီးလောင်ခြင်းများပါဝင်သည်။ သူသို့မဟုတ်သူမ၏ခြေလက်အင်္ဂါစနစ်သည်ယင်း၏အလုပ်ကိုသာလုပ်ဆောင်နေသည်။ ထိတွေ့မီးဖို = နာကျင်မှု၊ porn sites များ = အပျော်အပါး surfing ။ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရပ်တန့်ခြင်းသည်အသင်းအဖွဲ့များကိုအားနည်းစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်တိုးချဲ့အာရုံကြောစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) နှင့်အရံအာရုံကြောစနစ် (PNS) တို့ပါဝင်သည်။ CNS တွင် ဦး နှောက်နှင့်ကျောရိုးပါဝင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးမှအာရုံခံသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုလက်ခံရရှိသည့်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာသည်သက်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၊ ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ် 'သင်ကဲ့သို့ပင်' ကိုသက်ဝင်စေရန်ဆုံးဖြတ်ရန်၎င်းခန်ဓာကိုယ်လုံးမှရရှိနိုင်သည်။ တိကျသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည် PNS မှတစ်ဆင့်အချက်ပြသည်။ ဒါကြောင့်လိင်စိတ်နိုးထစေတဲ့ပုံရိပ်၊ အနံ့၊ ထိတွေ့မှု၊ အရသာသို့မဟုတ်စကားလုံးဆက်စပ်မှုက ဦး နှောက်မှလိင်အင်္ဂါများသို့လိင်စိတ်နိုးထလမ်းကြောင်းကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှအတွင်းမှာအနည်းငယ်အထိဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဦး နှောက်တွင်အာရုံကြောဆဲလ် (၈၆) ဘီလီယံ (သို့) အာရုံခံဆဲလ်များရှိသည်။ အာရုံခံဆဲလ် (သို့) အာရုံကြောဆဲလ်တွင် DNA ပစ္စည်းပါ ၀ င်သည့်နျူကလိယပါဝင်သောဆဲလ်ကိုယ်ထည်ရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည်အခြားနေရာမှအချက်အလက်များ၏ထည့်သွင်းမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပုံသဏ္changeာန်ကိုပြောင်းလဲစေသောပရိုတိန်းများပါ ၀ င်သည်။
1 ။ အာရုံခံကိုခေါ်ဆဲလ်အစိတ်အပိုင်းအထူးပြုပါပြီ dendrites နှင့် axon။ Dendrites ဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်မှလျှပ်စစ်အချက်ပြဆောင်ကြဉ်းနှင့် axon ကွာဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေသတင်းအချက်အလက်တွေယူပါ။
2 ။ အာရုံခံကာလြှပျစစျလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်အချင်းချင်း communicate ။
3 ။ အာရုံခံအချို့အထူးပြု (ဥပမာ, synapses) အဆောက်အဦများနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများ (ဥပမာ, neurotransmitters) ဆံ့။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
အာရုံခံအာရုံကြောစနစ်အတွင်း messenger ကိုဆဲလ်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ function ကိုကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အခြားမှမက်ဆေ့ခ်ျများထုတ်လွှင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကဦးနှောက်အတွင်းရှိဆဲလ်များနှင့် ပတ်သက်. 50% ပါဝင်သည်။ အခြားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% glial ဆဲလ်တွေဖြစ်တယ်။ ဤရွေ့ကား, homeostasis ထိန်းသိမ်းရန်ကြောင်း Non-အာရုံခံဆဲလ်များမှာ myelin ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက်အာရုံခံခြင်းနှင့်အရံနှောက်အာရုံကြောစနစ်အထောက်အပံ့နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေး။ Glial ဆဲလ်ထိုကဲ့သို့သောဆဲလ်အသေတက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အခြားသူများကိုပြုပြင်အဖြစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ပါ။
အဆိုပါအာရုံခံကျနော်တို့ '' မီးခိုးရောင်ကိစ္စ '' အဖြစ်စဉ်းစားအဘယ်အရာကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အလွန်ရှည်လျားသို့မဟုတ်အတိုကောက်နိုင်ပါတယ်သော axon, အဖြူရောင်ဖက်တီးပစ္စည်းဥစ္စာ (myelin) ကကာကွယ်ပေးနိုင်သောအခါ, ဤအချက်ပြပိုပြီးလျှင်မြန်စွာတလျှောက်သွားခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါကအဖြူအပေါ်ယံပိုင်းသို့မဟုတ် myelination မကြာခဏ '' အဖြူရောင်ကိစ္စ '' အဖြစ်ရည်ညွှန်းအရာဖြစ်တယ်။ သတင်းအချက်အလက်ခံယူသော Dendrites myelinated မရကြဘူး။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်လမ်းကြောင်းပေါင်းစပ်။ ဒါဟာအစ myelination မှတဆင့်ဆက်သွယ်မှုတက်အမြန်နှုန်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံခံအာရုံကြောသို့မဟုတ်အရေးယူအလားအလာဟုခေါ်တွင်လျှပ်စစ်အချက်ပြ၏ပုံစံမက်ဆေ့ခ်ျများသယ်ဆောင်။ တစ်ဦးအာရုံကြောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ဖန်တီး, ငါတို့အာရုံခံအဆိုပါ axon ၏အဆုံးအမှတ်မှာ neurotransmitters excite သို့မဟုတ်တားစီးဖို့ဆဲလ်များ၏အရှည်တစ်လှိုင်းပစ်ခတ်ရန်ချပေးပို့ရန်ကြောင့်တစ်ဦးအတွေးဒါမှမဟုတ်အတွေ့အကြုံ, လုံလောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလင်း, ရုပ်ပုံများ, အသံသို့မဟုတ်ဖိအားအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံခံအာရုံခံ excite ။ [/ x_text] [/ x_column] [/ x_row]
ပြန်ကြားရေးတစ် synapses သို့မဟုတ်ကွာဟမှုကိုဖြတ်ပြီးအခြားအာရုံခံဆဲလျမှတဦးတည်းအာရုံခံဆဲလျကနေစီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။ အာရုံခံအမှန်တကယ်, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမထိကြဘူး synapses အာရုံခံခွဲထုတ်သေးငယ်တဲ့ကွာဟချက်ပါပဲ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘယ်နေရာမှာမဆို 1,000 နှင့် 10,000 ဆက်သွယ်မှုများသို့မဟုတ်အခြားအာရုံခံနှင့်အတူ '' synapses '' အကြားရှိ Neurons ။ တစ်ဦးကမှတ်ဉာဏ်ကိုအတူတကွပစ်ခတ်အနံ့, မျက်မှောက်, အသံများနှင့်ထိတွေ့သယ်ဆောင်အာရုံခံ၏ရောနှောနှင့်အတူဖန်တီးလိမ့်မည်။
တစ် ဦး အာရုံကြောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့သို့မဟုတ်အရေးယူမှုအလားအလာတလျှောက်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်၎င်း၏ terminal ကိုမှာ axon ၏အဆုံးရောက်ရှိသောအခါ, သူကကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်စဉ်များအစပျိုးလိုက်သည်။ terminal တွင်တုန့်ပြန်မှုအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေသည့် neurochemicals အမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်နေသောသေးငယ်သောအမှုန်များ (sacs) ရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအချက်ပြမှုသည်ကွဲပြားခြားနားသော neurotransmitters များပါ ၀ င်သောအမှုန်များကိုလှုံ့ဆော်သည် ဤအမှုန်များသည် terminal ၏အလွန်အစွန်းသို့ရွေ့သွားပြီး၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကို synapses သို့ထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းသည်ဤအာရုံခံမှဖြတ်သန်းရာသို့ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန့်နှံ့သွားသည်နှင့်နောက်အာရုံခံကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။
တစ်ကျဆင်းမှုလည်းမရှိဆိုပါက ဖြစ်စေ အာရုံကြောဓာတုပမာဏ (ဥပမာ dopamine) သို့မဟုတ်လက်ခံသူအရေအတွက်၊ မက်ဆေ့ခ်ျကိုသွားရန် ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသူများသည် dopamine အချက်ပြစွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းသည်။ အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ် receptors များ၏ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ပိုမိုအားကောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်လမ်းကြောင်းသို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုသောအခါထိုလမ်းကြောင်းများသည်တက်ကြွ။ အားကောင်းလာသည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကသူတို့ကိုအလွယ်တကူစီးဆင်းစေသည်။ လူတစ် ဦး သည်အလေ့အထကိုဖြတ်လိုက်သောအခါအနည်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့်လွယ်ကူသောစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအချို့လိုအပ်သည်။
Neuromodulation အဆိုပါဖြစ်ပါသည် ဇီဝကမ္မ ပေးထားသောအရာအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို အာရုံခံဆဲလျ အာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားလူဦးရေကိုထိန်းညှိဖို့တစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဓာတုပစ္စည်းအသုံးပြုသည်။ ဤသည်ဂန္ထဝင်မတူဘဲ၌တည်ရှိ၏ Synaptic ဂီယာ, သောတဦးတည်း presynaptic အာရုံခံဆဲလျတိုက်ရိုက်တစ်ခုတည်း postsynaptic မိတ်ဖက်, အချက်အလက်များ၏တဦးတည်း-to-တဦးတည်းဂီယာသြဇာလွှမ်းမိုး။ အာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့အဖွဲ့ကလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် Neuromodulators မျိုးစုံတွင် neuron ထိခိုက်, အာရုံကြောစနစ်၏ကြီးမားသောဒေသများများကို ဖြတ်. ။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ထဲမှာဗိုလ်မှူး neuromodulators ပါဝင်သည် dopamine, serotonin, acetylcholine, histamineနှင့် norepinephrine / noradrenaline ။
Neuromodulation pre-Synaptic အာရုံခံဆဲလျသဖြင့် reabsorbed တစ်ခုသို့မဟုတ်သို့ပြိုပျက်မဟုတ်သော neurotransmitter အဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ် metabolite။ ထိုသို့သော neuromodulators ထဲမှာအချိန်သိသိသာသာငွေပမာဏဖြုန်းတက်အဆုံးသတ် cerebrospinal fluid (CSF) သည်အခြားအာရုံခံဆဲလ်များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုလွှမ်းမိုးခြင်း (သို့မဟုတ် "ပြုပြင်ခြင်း") ပြုလုပ်သည် ဦးနှောက်။ ဤအကြောင်းကြောင့်အချို့ neurotransmitters လည်းထိုကဲ့သို့သော serotonin နဲ့ acetylcholine အဖြစ် neuromodulators, ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။ (Wikipedia ကိုကြည့်ပါ)
<< ဦး နှောက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်း >>